Asturnaanta Websaydhka & Diidmada Caafimaadka PW
Asturnaanta & Diidmada
Markii ugu dambeysay wax laga beddelay: 1-da Maajo, 2014
Annaga (si wada jir ah "Shirkadda", "Annaga" ama "Us") waannu ixtiraamaynaa asturnaantaada oo Shirkadda waxaa ka go'an inay ku ilaaliso iyada oo loo hoggaansamo siyaasaddan.
Nidaamkani wuxuu qeexayaa noocyada macluumaadka ee aan kaa soo qaadan karno ama aad bixin karto markii aad booqato degelkan (websaydhkayaga)") iyo dhaqamadeenna ku saabsan ururinta, adeegsiga, dayactirka, ilaalinta iyo shaacinta macluumaadkaas.
Nidaamkani wuxuu quseeyaa macluumaadka aan ururinno:
Iimaylka, qoraalka, taleefanka iyo farriimaha elektiroonigga ah ee u dhexeeya adiga iyo Website-kan.
Iyada oo loo marayo barnaamijyada moobiilka iyo kombiyuutarka ee aad ka soo degsato degelkan Websaydhkan, oo bixiya is-dhexgal u-gaar ah oo aan ku saleysneyn biraawsar adiga iyo Website-kan.
Markaad la macaamilayso xayeysiiskayaga iyo codsiyadayada websaydhka iyo adeegyada saddexaad, haddii barnaamijyadaas ama xayeysiiskaas ay ku jiraan xiriiriyeyaasha siyaasaddan.
Ma khusayso macluumaadka ay soo ururiyeen:
Waxaan ku isticmaalnaa khadka tooska ah ama loo maro qaab kasta oo kale, oo ay ku jiraan degel kasta oo kale oo ay maamusho Shirkadda ama cid kasta oo saddexaad (oo ay ku jiraan kuwa nala shaqeeya iyo kuwa hoos yimaada); ama
Qeyb kasta oo saddexaad (oo ay ku jiraan kuwa ku xiran iyo kuwa hoos yimaada), oo ay ku jiraan codsi kasta ama nuxur (oo ay ku jiraan xayeysiinta) oo ku xirmi kara ama laga heli karo ama ku yaal Websaydhka
Fadlan si taxaddar leh u akhri siyaasaddan si aad u fahamtid siyaasadahayaga iyo dhaqammadayada la xiriira macluumaadkaaga iyo sida aan ula dhaqmi doonno. Haddii aadan ku raacsaneyn siyaasadahayaga iyo dhaqamadeena, xulashadaadu ma aha inaad isticmaasho Websaydhadeena. Markaad gasho ama isticmaasho Websaydhkan, waxaad ogolaatay siyaasaddan asturnaanta. Nidaamkani wuu is beddeli karaa waqti ka waqti. Dhammaan isbeddeladu waxay wax ku ool yihiin isla marka aan dhajinno, oo waxaan ku dabaqnaa dhammaan marin u helka iyo isticmaalka Websaydhka intaa ka dib. Isticmaalkaada joogtada ah ee Website-kan kadib markii aan sameynay isbadalada waxaa loo arkaa inay aqbalayaan isbadaladaas, markaa fadlan kafiiri siyaasad xilliyo casriyeynta
Carruurta Da'doodu ka yar tahay 13
Websaydhkeena looguma talagalin carruurta da'doodu ka yar tahay 13 sano. Ma jiro qof da'diisu ka yar tahay 13 oo bixin kara wax macluumaad shakhsi ah ama ku jira Websaydhka. Kama ogaaneyno inaan ka soo aruurinno macluumaadka shakhsi ahaaneed carruurta ka yar 13. Haddii aad ka yar tahay 13, ha isticmaalin ama ha bixin wax macluumaad ah oo ku saabsan Websaydhkan ama adoo u maraya ama u maraya mid ka mid ah astaamaheeda / iska diiwaangelinta Websaydhka, wax iibsasho ah adoo adeegsanaya Websaydhka, isticmaal mid kasta oo ka mid ah astaamaha is-dhexgalka ama faallooyinka dadweynaha ee Websaydhkan ama na siiso wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan, oo ay ku jiraan magacaaga, cinwaankaaga, lambarka taleefankaaga, cinwaanka e-maylka ama shaashad kasta ama magaca isticmaale ee aad isticmaali karto. Haddii aan ogaanno inaan ka aruurinnay ama ka helnay macluumaad shakhsi ahaaneed ilmo ka yar 13 sano annaga oo aan la xaqiijin oggolaanshaha waalidka, waan tirtiri doonnaa macluumaadkaas. Haddii aad aaminsan tahay inaanu wax macluumaad ah ka heli karno ama ku saabsan ilmo ka yar 13 jir, fadlan nagala soo xiriir macluumaadka xiriirka ee ku dhex yaal Websaydhka.
Macluumaadka aan kaa aruurinno adiga iyo sida aan u ururinno
Waxaan ka soo ururineynaa dhowr nooc oo macluumaad ah oo ku saabsan iyo adeegsadayaasha shabakadeena, oo ay ku jiraan macluumaadka:
Taas oo lagugu aqoonsan karo shakhsi ahaan, sida magaca, cinwaanka boostada, cinwaanka e-maylka, iyo lambarka taleefanka ("macluumaadka shakhsiyeed");
Taasi adiga ayey kugu saabsan tahay laakiin shaqsi ahaan kuuma aqoonsana; iyo / ama
Ku saabsan xiriirkaaga internetka, qalabka aad u isticmaasho helitaanka Websaydhada iyo faahfaahinta isticmaalka.
Waxaan ururinaa macluumaadkan:
Si toos ah adiguu kaaga imaanayaa markaad na siiso.
Si otomatig ah markaad u dhex mushaaxayso goobta. Macluumaadka si toos ah loo ururiyo waxaa ku jiri kara faahfaahinta isticmaalka, cinwaanada IP-ga iyo macluumaadka lagu soo ururiyey cookies, beakons webka iyo teknoolojiyada kale ee raadraaca.
Laga soo bilaabo dhinacyada saddexaad - tusaale ahaan, wada-hawlgalayaashayada ganacsiga.
Macluumaadka aan ka soo aruurinno ama ku soo gudbino Websaydhada waxaa ka mid noqon kara:
Macluumaadka aad bixiso adoo ku buuxinaya foomamka Websaydhada. Tan waxaa ka mid ah macluumaadka la bixiyay waqtiga diiwaangelinta si loo isticmaalo Websaydhkeenna, ka-diiwaangelinta adeeggayaga, dhajinta qalabka, ama codsan adeegyo dheeraad ah. Waxaan sidoo kale ku weydiin karnaa macluumaad markaad galeyso tartan ama dallacsiin aan annagu qabanno, iyo markii aad soo sheegto dhibaato ka taagan Websaydhadeena.
Diiwaanka iyo nuqulada waraaqahaaga (oo ay ku jiraan cinwaanada emaylka), haddii aad nala soo xiriirto.
Jawaabahaaga sahaminta oo aan ku weydiin karno inaad u dhammaystirto ujeedo cilmi baaris ah.
Faahfaahinta macaamilada aad ku fuliso Boggeena internetka iyo fulinta amaradaada. Waxaa lagaa rabi karaa inaad bixiso macluumaad maaliyadeed iyo shaqsiyeed kahor intaadan dalban amarka Boggeena.
Weydiimahaaga raadinta websaydhka.
Waxa kale oo aad bixin kartaa macluumaad si loo daabaco ama loo soo bandhigo (hadda kadib, "la dhajiyay") meelaha caamka ah ee Websaydhka, ama loogu gudbiyo isticmaaleyaasha kale ee Websaydhka ama dhinacyada saddexaad (si wada jir ah, "Ku-biirinta Isticmaalaha"). Ku darsigaaga Isticmaalaha ayaa lagu dhejiyaa oo loo gudbiyaa kuwa kale iyadoo aad qatar u tahay. In kasta oo laga yaabo inaan xadidno marin u helista bogagga qaarkood, fadlan la soco in aysan jirin tallaabooyin ammaan oo kaamil ah ama aan laga gudbi karin. Intaa waxaa sii dheer, ma xakamayn karno ficilada isticmaaleyaasha kale ee Websaydhka oo aad kala dooran karto inaad la wadaagto Ku-biirintaada Isticmaalaha. Sidaa darteed, ma ballan qaadi karno mana dammaanad qaadi karno in tabarucaadkaaga Isticmaalaha aysan daawan doonin dadka aan la oggolaan.
Macluumaadka aan ku ururinayno Teknolojiyadaha Xog uruurinta tooska ah
Markaad dhex mushaaxayso oo aad la falgaleyso Websaydhadeena, waxaan u isticmaali karnaa tikniyoolajiyadaha xog ururinta otomaatiga ah si aan u ururino macluumaad gaar ah oo ku saabsan qalabkaaga, ficilada daalacashada iyo qaababka, oo ay ku jiraan:
Faahfaahinta booqashooyinkaaga Websaydhkeenna, oo ay ku jiraan xogta taraafikada, xogta goobta, diiwaanada iyo macluumaadka kale ee isgaarsiinta iyo ilaha aad ka hesho oo aad ku isticmaasho Websaydhka.
Macluumaadka ku saabsan kombiyuutarkaaga iyo xiriirka internetka, oo ay ku jiraan cinwaankaaga IP, nidaamka hawlgalka iyo nooca browser.
Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa tikniyoolajiyadaan si aan u ururino macluumaadka ku saabsan waxqabadyadaada internetka waqti ka dib iyo dhammaan websaydhyada dhinac saddexaad ama adeegyada kale ee khadka tooska ah (dabagalka akhlaaqda).
Macluumaadka aan si otomaatig ah u ururinno waxaa ku jiri kara macluumaadka shakhsiyeed, ama waan ilaalin karnaa ama ku xiriirin karnaa macluumaadka shakhsiyeed ee aan ururinno siyaabo kale ama aan uga helno dhinacyada saddexaad. Waxay naga caawineysaa inaan horumarinno Boggeena internetka iyo inaan gaarsiino adeeg ka wanaagsan oo shakhsi ahaaneed, oo ay ku jirto iyadoo awood noo siineysa:
Qiyaasaan cabirka dhagaystayaasha iyo qaababka isticmaalka.
Ku kaydi macluumaadka ku saabsan doorbidkaaga, oo noo oggolaanaya inaan u qaabeyno Websaydhada iyadoo loo eegayo danahaaga shakhsi ahaaneed.
Waan ku aqoonsan doonaa markaad ku soo noqoto Website-keena.
Teknoolajiyada aan u adeegsaneyno ururinta xogtan si toos ah waxaa ku jiri kara:
Kukiyada (ama cookies cookies). Cookie waa feyl yar oo lagu dhejiyo drive-ka adag ee kombiyuutarkaaga. Waad diidi kartaa inaad aqbasho cookies-ka biraawsarka adoo ka shaqeynaya dejinta ku habboon biraawsarkaaga. Si kastaba ha noqotee, haddii aad doorato dejintan waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad gasho qaybo ka mid ah Websaydhada. Ilaa aad ka hagaajisid dejinta biraawsarkaaga si uu u diido cookies, nidaamkayagu wuxuu soo saari doonaa cookies marka aad toos ugu wareejiso biraawsarkaaga Websaydhadeena.
Kukiyada Flash. Waxyaabaha qaarkood ee boggeena internetka ayaa isticmaali kara walxaha deegaanka ku kaydsan (ama Flash cookies) si ay u ururiyaan una kaydiso macluumaadka ku saabsan doorbidkaaga iyo marinka, ka iyo boggayaga internetka. Kukiyada Flash-ka laguma maamulo isla isla goobaha loo isticmaalo cookies cookies.
Shabakadaha Internetka. Bogagga shabakaddayada iyo e-maylkeennu waxay ka koobnaan karaan faylalka elektaroonigga ah ee yar yar ee loo yaqaan 'beacons web' (sidoo kale loo yaqaan gifs cad. Pixel tags iyo hal-pixel gifs) oo u oggolaanaya Shirkadda, tusaale ahaan, inay tiriyaan isticmaaleyaasha booqday kuwa bogag ama loo furay emayl iyo tirakoobyada kale ee la xiriira (tusaale ahaan, duubista caannimada bogagga internetka qaarkood iyo hubinta nidaamka iyo daacadnimada serverka).
Nambarada taleefanka ee la raaci karo oo la socda wicitaanada taleefanada loo sameeyo lambarrada taleefannada qaar ee boggan ku yaal
Xogta websaydhka qad la'aanta ah - oo ay ku jiraan labadaba howlaha maxalliga ah iyo kuwa fog
Macluumaadka bartilmaameedka juqraafi ee ku saabsan goobtaada waqtiga isticmaalka goobta.
Ma aqbalno Macluumaadka Shakhsiyeed si toos ah, laakiin waxaa laga yaabaa inaan macluumaadkaaga kuugu xirno macluumaadka shakhsi ahaaneed ee adiga kugu soo aruurineyno ilo kale ama aad na siiso.
Qeybta Saddexaad Isticmaalka Kukiyada iyo Teknoolojiyadaha kale ee Raadinta
Qaar ka mid ah maadooyinka ama codsiyada, oo ay ku jiraan xayeeysiinta, Website-ka waxaa loo adeegaa dhinacyada saddexaad, oo ay ku jiraan xayeysiiyayaasha, shabakadaha isku-xirka iyo server-yada, bixiyeyaasha content iyo bixiyeyaasha dalabka. Qaybaha saddexaad waxay isticmaali karaan kalkaaliyeyaasha kelidii ah ama si wadajir ah ula shaqeeya shabakadaha websaydhka ama tiknoolajiyada kale ee raadraaca si ay u ururiyaan macluumaadka adiga markaad isticmaaleyso boggayaga. Macluumaadka ay ururiyaan waxay la xiriiri karaan macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ama waxay ururin karaan macluumaadka, oo ay ku jiraan macluumaadka shakhsi ahaaneed, ku saabsan hawlahaaga internetka waqtigooda iyo shabakadaha kala duwan iyo adeegyada kale ee internetka. Waxay u adeegsan karaan macluumaadkan si ay kuu siiyaan xayeysiis ku salaysan danab (dabeecad) ama waxyaabo kale oo la beegsaday.
Ma xakamaynayno dhinacyadan saddexaad tiknoolajiyada raadraaca iyo sida loo isticmaali karo. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid xayeysiinta ama waxyaabaha kale ee la bartilmaameedsanayo, waa inaad si toos ah ula xiriirtaa bixiyaha mas'uulka ka ah.
Waxaan u isticmaalnaa macluumaadka aan kaa soo aruurino adiga ama aad na siiso, oo ay ku jiraan wixii macluumaad shakhsi ah:
Si aan kuugu soo bandhigno Websaydhada iyo waxyaabaha ku jira.
Si laguu siiyo macluumaad, alaab ama adeeg aad naga codsato.
Inaad fuliso ujeeddo kasta oo kale oo aad u bixiso.
Si laguu siiyo ogeysiisyo ku saabsan koontadaada / rukunkaaga, oo ay ku jiraan dhicitaanka iyo ogeysiisyada cusboonaysiinta.
Si loo fuliyo waajibaadkayaga loona xoojiyo xuquuqdeena ka soo baxda qandaraas kasta oo nala galo adiga iyo adiga, oo ay ku jiraan biil bixinta iyo aruurinta.
Si aan kuu ogeysiiyo wixii ku saabsan isbeddelada ku yimid Websaydhadeenna ama wax soo saarro ama adeegyo aan bixinno ama aan bixinno in kastoo ay tahay.
Si laguu oggolaado inaad kaqeybqaadato astaamaha is-dhexgalka ee Websaydhkeena.
Siyaabo kale oo aan ku qeexi karno markaad bixiso macluumaadka.
Wixii kale ee ujeedada kale ee ogolaanshahaaga.
Waxa kale oo laga yaabaa inaan u isticmaalno macluumaadkaaga inaan kaala soo xiriirno wixii ku saabsan alaabteenna iyo adeegyadayada saddexaad iyo kuwa saddexaad ee adiga xiisaha kuu leh.
Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadka aan kaa soo ururinay si aan awood ugu siino inaan tusno xayeysiis dhagaystayaasha bartilmaameedka ah ee xayeysiistayaasha. In kasta oo aanan shaaca uga qaadaynin macluumaadkaaga shakhsiyadeed ujeeddooyinkan adiga oo aan oggolaanin, haddii aad gujiso ama haddii kale aad la macaamisho xayaysiis, xayeysiiyaha ayaa u qaadan kara inaad buuxisay shuruudihiisa bartilmaameed.
Waxaa laga yaabaa inaan shaaca ka qaadno macluumaadka isku-darka ah ee ku saabsan adeegsadeyaashayada, iyo macluumaadka aan aqoonsanayn shaqsi kasta, iyada oo aan la xadidin.
Waxaa laga yaabaa inaan shaaca ka qaadno macluumaadka shakhsiga ah ee aan ururinno ama aad na siiso sida lagu sharraxay siyaasaddan asturnaanta:
Ku-xigeennadeenna iyo xulufadeena.
Qandaraasleyaasha, bixiyeyaasha adeegga iyo dhinacyada kale ee seddexaad waxaan u adeegsanaa inaan ku taageerno ganacsigeenna oo ay waajib ku tahay waajibaadka qandaraaska inay ku xafidaan macluumaadka shaqsiyeed mid qarsoodi ah oo ay u adeegsadaan oo keliya ujeedooyinka aan ugu bandhigno iyaga.
Iibsadaha ama ku-xigeen kale haddii ay dhacdo isku-dar, quusid, dib-u-habeyn, dib-u-habeyn, kala dirid ama iibin kale ama wareejinta qaar ama dhammaan hantida Shirkadda, ha ahaato walaac socda ama qayb ka mid ah musalafnimada, dareere ama dacwad la mid ah, kaas oo macluumaadka shakhsiyadeed ee ay hay'addu ka hayso dadka isticmaala Websaydhada ay ka mid yihiin hantida la wareejiyay.
In dhinac saddexaad loo suuq geeyo wax soo saarkooda ama. Waxaan qandaraas ahaan uga baahan nahay dhinacyadan saddexaad inay xafidaan macluumaadka shakhsiga ah si qarsoodi ah oo ay u adeegsadaan oo keliya ujeedooyinka aan ugu bandhigno iyaga.
Inaad fuliso ujeedada aad u fidisay. Tusaale ahaan, haddii aad na siiso cinwaan e-mayl ah si aan u adeegsanno aaladda "e-maylka saaxiib" ee Boggeena, waxaan u gudbin doonnaa waxyaabaha ku jira e-maylkaas iyo cinwaanka e-mailkaaga kuwa loo soo diray.
Ujeeddo kasta oo kale oo aan shaaca ka qaadno markaan bixinno macluumaadka.
U hogaansanaanta amar kasta oo maxkamadeed, sharci ama nidaam sharci ah, oo ay kujirto kajawaabida wixii dowlad ama codsi sharciyeed ah.
Si loo dhaqangaliyo ama loo adeegsado shuruucdeena adeegsiga ama shuruudaha iibka iyo heshiisyada kale, oo ay ku jiraan ujrada biilasha iyo aruurinta.
Haddii aan aaminsanahay in shaacintu ay tahay mid loo baahan yahay ama ku habboon si loo ilaaliyo xuquuqda, hantida, ama amniga Shirkadda, macaamiisheenna ama kuwa kale. Tan waxaa ka mid ah is-weydaarsiga macluumaadka shirkadaha kale iyo hay'adaha ujeeddooyinka ilaalinta khayaanada iyo yareynta halista amaahda.
Xuquuqdaada Qarsoodiga ee California
Qaybta Sharciga Madaniga ah ee California § 1798.83 waxay u oggolaanaysaa dadka isticmaala Degelkeenna kuwa deggan California inay codsadaan macluumaad gaar ah oo la xiriira shaacinta macluumaadka shaqsiyeed ee aannu siinayno dhinacyada saddexaad ujeedooyinkooda suuq-geyn toos ah Si aad u sameyso codsi noocan oo kale ah, fadlan noo soo qor ama na soo wac iyada oo ku saleysan macluumaadka xiriirka iyo cinwaanka laga helo Websaydhka.
Isbedelada Nidaamkayaga Qarsoodiga ah
Waa siyaasadeena inaan ku dhajino wixii isbedel ah ee aan ku sameyno siyaasadeena asturnaanta boggan. Haddii aan wax ka beddeleyno sida aan ula dhaqmayno macluumaadka shakhsiyeed ee isticmaaleyaasheena, waxaan kugu soo wargelin doonnaa ogeysiis ku saabsan bogga internetka ee Websaydhka. Taariikhda markii ugu dambeysay ee sharciga dib-u-habeyn lagu sameeyay lagu aqoonsaday korka bogga. Adiga ayaa mas'uul ka ah hubinta inaan kuu hayno cinwaan emayl firfircoon oo la bixin karo adiga, iyo inaad xilli-xilli booqato Websaydhkeenna iyo siyaasaddan asturnaanta si aad u hubiso wixii isbeddel ah.
Si aad u weydiiso su'aalo ama faallo ku saabsan siyaasaddan asturnaanta iyo dhaqammadayaga asturnaanta, fadlan noo soo qor ama na soo wac iyada oo ku saleysan macluumaadka xiriirka iyo cinwaanka laga helo Websaydhkeenna.